OOG-Suzhou Sohologistics CO ။ , LTD ။
OOG (Out Of Gauge) သည်အလွန်ကြီးမားသောအရွယ်အစားကြီးသောကွန်တိန်နာအားလုံးအတွက်သို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောကွန်တိန်နာအားလုံးအတွက်နာမည်တိုဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် - open-top container, flat rack container (သို့မဟုတ် frame container)၊
reffer ကွန်တိန်နာ, စားဆင်ယင်ချိတ်ဆွဲကွန်တိန်နာနှင့်တင့်ကားကွန်တိန်နာ။
Sohologistics သည် Open Top container နှင့် flat rack container ၏အဆိုအရစီမံကိန်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်ကြီးများကိုဆောင်ရွက်သည်
Open Top Container short (တိုရန် OT ဟုလူသိများသည်) သည် OOG အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
နာမတော်၏အဓိပ္ပာယ်အရဆိုလျှင်ဤအမျိုးအစားပေါ်ရှိထိပ်သည်မတူညီသောထိပ်တန်းပစ္စည်းများကြောင့် hard OT နှင့် soft OT နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။
Hard OT သည်ဖြုတ်တပ်။ မရသောသံမဏိခေါင်မိုးပေါ်တွင်ထိပ်တွင်ရှိနေပြီးပျော့ပျောင်းသော OT တွင်ဖြုတ်နိုင်သောထုပ်များနှင့်အပေါ်မှဖြုတ်တပ်ထားသောပတ္တူအချို့ရှိသည်။
အတော်လေးမြင့်မားသောလေးလံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် OT မထိုက်မတန်။
မတူညီသောသဘောင်္များအရ ၄ မီတာထက်မပိုသောကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံနိုင်သည်။
မကြာခဏဘောင်ကွန်တိန်နာသို့မဟုတ် FR ကွန်တိန်နာအဖြစ်ရည်ညွှန်း Flat Rack ကွန်တိန်နာ။
တခါတရံအဆုံး wallboard များကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်သော်လည်း bottom ကျန်ရှိနေသောအောက်ခြေပြားနှင့်ထောင့်ကော်လံ ၄ ခုသာကျန်ရှိသည်၊ ၎င်းကို Flat Plug Container ဟုခေါ်သည်။
FR ကွန်တိန်နာများသည် ၀ န်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုရရှိရန်အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောကွန်တိန်နာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်၎င်း၏အထူအောက်ခြေပြားနှင့်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အရှည်ကျော်၊ ကျယ် ၀ န်းသော၊ ကြီးမားသောစူပါကြီးမားသောစက်ယန္တရားများသို့မဟုတ်အကြီးစားကုန်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်သည်။
မတူညီသောသင်္ဘောတင်သင်္ဘောစံချိန်စံညွှန်းများအရ ၄.၅ မီတာထက်မပိုသော ၄-၃ အမြင့်ကြီးသောကုန်တင်များကိုလက်ခံနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အရှည်အတွက် cargo ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်အရ ၁၅ မီတာအတွင်းဖြစ်သင့်သည်။ ， အပြင် attention အလေးထားပါကကုန်ပစ္စည်းကြီးများသည်နှစ်ဖက်စလုံးမှရုတ်တရက်အမှတ် (၂.၀၈ မီလီမီတာအကွာအဝေးအကွာအဝေး) ရှိကုန်သေတ္တာတင်သည့်နေရာများကိုပိတ်ဆို့။ မရပါ။
လိုအပ်ပါကကုန်သေတ္တာများသိုလှောင်သည့်အခါရေစိုခံ။ စိုစွတ်သောရေစိုခံရန်လိုအပ်သည်။ ထုပ်ထိန်သိမ်းသည့်ကွန်တိန်နာသည်ယေဘုယျအားဖြင့်တံဆိပ်ခတ်။ မခံရသည့်ကွန်တိန်နာထိပ်များပေါ်တွင်တည်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အရှည် width အမြင့် width အမြင့် width အမြင့် အများဆုံးစုစုပေါင်း တောမြိုးစေ့ အများဆုံး payload
၂၀ ရက် 5600 2350 2210 N / A 31750 2750 26250
၂၀ ရက် 11600 2350 1950 N / A 39900 4900 35000
Sohologistics သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ MSK, ZIM, YML, CSCL, WHL, KMTC နှင့် CMA စသည့်ကျော်ကြားသောရေငုပ်သင်္ဘောများနှင့်ရေရှည်မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်။ SHL သည်အမြန်ဆုံးသောနည်းဖြင့်ကိုးကားခြင်းလုပ်ငန်း၌အားသာချက်များရှိပြီးဖောက်သည်တိုင်းကိုကြင်နာစွာဖြင့်အစေခံသည်။
OOG ၏နှစ်စဉ်ပို့ကုန်နှင့်တင်ပို့မှုပမာဏသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းများကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် ၈၀၀ ပီစီကျော်ရှိသည်။ အကောက်ခွန်ကြေငြာခြင်း၊ အတွင်းပိုင်းတင်ခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စုစည်းခြင်းနှင့်စည်းနှောင်ခြင်း၊ နောက်တွဲယာဉ်၊ ပြည်ပမှရှင်းလင်းခြင်း၊ လေးလံသောကုန်တင်အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းများအတွက်တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်သွားနိုင်မည့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းမှုများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများလည်းရှိသည်။
၁။ ကုန်တင်နှင့်ကုန်သေတ္တာအကြားထိရောက်သောစည်းနှောင်ခြင်းနှင့်အားဖြည့်ခြင်း၏နိယာမသည်ကုန်တင်ကုန်ချကွန်တိန်နာ၏နှစ်ဖက်စလုံးသို့မထိခြင်း (သို့) သယ်ယူခြင်းနှင့်ရွက်လွှင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကုန်စည်များပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန်ကုန်စည်များကိုမတင်မိစေရန်တားဆီးရန်ဖြစ်သည်။ ။
၂။ အခြားအဆုံးကိုချနေစဉ် frame container ၏ baffle (Rack) ၏တစ်ဖက်ကိုထူထောင်ရန်တားမြစ်သည်။ အနှောက်အယှက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုတချိန်တည်းတွင်စိုက်ထားရမည်။
3. ကုန်ပစ္စည်းကိုအလေးချိန်နှင့်အညီဘောင်ကွန်တိန်နာ၏သစ်သားကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်အညီအမျှစီစဉ်ထားသင့်သည်။ တစ်ဖက်ကပိုစိတ်ဖိစီးမှုမထားပါနဲ့။ နှစ်ဖက်စလုံးမှရှည်လျားစွာရွေ့လျားခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်ခြင်းအားတားဆီးရန်အတွက်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်သပ်ရပ်ခြင်းများကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
4. ပွတ်တိုက်မှုကိန်းတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အားသွင်းသူများနှင့်ဘောင်ကွန်တိန်နာ၏ကြမ်းပြင်များအကြားအိပ်ပျော်နေရန်လိုအပ်သည်။ လောင်ဂျီတွဒ်လှုပ်ရှားမှုမှကာကွယ်ရန်ဘောင်ကွန်တိန်နာ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အားသွင်းများနှင့်အစုအဝေးများကြားတွင်ပံ့ပိုးမှုများဖြည့်တင်းသင့်သည်။
5. ဘောင်ကွန်တိန်နာ၏လေးထောင့်လေးထောင့်ပုံသဏ္partsာန်ကိုကုန်တင်သို့မဟုတ်အားဖြည့်ခြင်းဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ Lifting Points၊ ကုန်တင်ကုန်သေတ္တာများနှင့်ဘောင်ကွန်တိန်နာ၏ရှုပ်ထွေးမှုကြားကွာဟချက်သည်အနည်းဆုံး ၃၀ စင်တီမီတာရှိရမည်။ မဟုတ်ရင်ဆိပ်ခံတံတားစက်ယန္တရားသည်ဤလေးလံသောကုန်ပစ္စည်းများသယ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။
6. ဘောင်ကွန်တိန်နာ၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အားဖြည့်ပေးသောအရာတစ်ခုစီ၏ဝန်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၅ တန်ဖြစ်သည်။
(၇) သံလက်သည်းများအသုံးပြုခြင်းအားအိပ်ယာ ၀ ယ်သူ (သို့မဟုတ်) သစ်သားပြားများကိုဘောင်ကွန်တိန်နာ၏သစ်သားကြမ်းပြင်သို့မောင်းနှင်ရန်တားမြစ်သည်။ သို့မှသာဘောင်ကွန်တိန်နာပျက်စီးခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးဝန်တင်နိုင်စွမ်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
၈။ ကြိုးကြိုးသို့မဟုတ်နိုင်လွန်ကြိုးခါးပတ်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားရမည်။ ဝါယာကြိုးကြိုးကို turnbuckle fastener တပ်ဆင်ရမည်၊ နိုင်လွန်ကြိုးခါးပတ်အားဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်တပ်ဆင်ထားရမည်။
10. ပြားချပ်ပြားထိန်သိမ်းသည့်ကွန်တိန်နာ၊ ဘောင်နှစ်ခုစွန်းတွင်ရှိသောရှုပ်ထွေးမှုများကိုပြောင်းပြန်အဖြစ်ထည့်သွင်းခြင်း (ဥပမာ - ထောင့်ပုံသွန်းခြင်း) ကိုနိုင်ငံတကာအလေ့အကျင့်အရသင်္ဘော၏ကုန်းပတ်ပေါ်တွင်သာအခြေခံထားနိုင်သည်။ သင်္ဘောပေါ် cellguide ။
20´Capsapsible Flat ထိန်သိမ်း
40´Capsapsible Flat ထိန်သိမ်း
Open Tops ၏သတ်မှတ်ချက်